Eufy RoboVac G20 Hybrid yakangwara uye inoshanda kuchenesa [Ongororo] | Nhau Gadgets
Eufy RoboVac G20 Hybrid yakangwara uye inoshanda kuchenesa [Ongororo]
Eufy Inoenderera mberi nekubheja pane yakabatana, yakangwara uye, pamusoro pezvose, inobatsira imba. Mune ino kesi, isu tinofanirwa kutaura nezve iwo madiki, akatenderera marobhoti ane nyeredzi mumavhidhiyo mazhinji paTikTok, kazhinji nekuda kwekunyanya kusada kwavanobatwa nako nedzimwe nhengo dzemba, senge katsi.
Pachiitiko ichi tinoongorora zvakadzama iyo Eufy RoboVac G20 Hybrid itsva, imwe nzira iri pakati-renji ine kusveta kukuru uye nyore kugadzirisa. Ziva nesu iyi yekupedzisira sarudzo yekodhi yekuchenesa yakabatana iyo Eufy inotipa uye kana ichinyatso kukoshesa kufunga vakwikwidzi vayo.
2 Kurongeka kwezvinhu uye maitiro ehunyanzvi
3 Kuchenesa uye kushanda
Panyaya iyi Eufy haana kubheja, haana innovation, haana kushinga ... Ngativei chokwadi, zvakaoma kuona robot vacuum cleaner inobata pfungwa dzako, chaizvoizvo dzakafanana uye ndinonzwisisa kuti ndizvo. nekuda kwekuti dhizaini yaro inoshanda zvekuti kushandura millimita imwe chete kunounza matambudziko akawanda kupfuura mhinduro. Imhaka yazvo isu hatisi kuzofunga kuti iyi robhoti vacuum cleaner inoita semamwe mamirioni matatu aripo pamusika uye isu tichatarisa pane marongerwo ehadhi yayo uye kunaka kwezvinhu zvayo.
Wakazvida here? Tenga iyo chete 299,99 euros paAmazon!
Vacuum cleaner robhoti
Chigadzirwa chacho chine 32 centimita muhupamhi uye chinonyanya kushamisa ndechekuti ingori 7,2 masendimita mukobvu, uye ndezvekuti Eufy anototiyambira kuti takatarisana nemudziyo wakatetepa, chimwe chinhu chatinosimbisa. Chikamu chepamusoro chakagadzirwa negirazi, chinokwezva mafingerprints asi chiri nyore kuchenesa, chimwe chinhu chandinofarira pamusoro pe "jet dema" inowanzoiswa nemamwe mabhureki uye kusimba kwayo hakupfuuri mazuva akati wandei. Kana iri huremu, isu hatina nhamba chaiyo, uye tichifunga kuti hatisi kuzoitakura muhomwe yedu, handina kuzviona zvakakosha kuti tiise pachiyero, kunyange zvazvo. ziso rakanaka rebhakiti Ndinogona kukuudza kuti kwakareruka.
Kurongeka kwezvinhu uye maitiro ehunyanzvi
Tine kurongeka kwechinyakare maererano nezvinhu zvepasi peiyo Eufy RoboVac G20 Hybrid, ine musanganiswa wepakati mutsva, ine silicone uye nylon bristles, iyo mukuona kwangu ndiyo inonyanya kushanda kune marudzi ose ezviso. Inoperekedzwa pamwe chete nemavhiri maviri akavharidzirwa kuti akwanise kukunda zvipingamupinyi zvemasendimita matatu, aine vhiri risingaperi rinotungamira mudziyo uye rimwe divi bhurasho.
Zvemashure Tangi retsvina rinosara, tangi remvura, raizosungirirwa kune yambotaurwa, uye mop inonamatira neVelcro. Isu tinoita, zvisinei, tine ON / OFF switch, chimwe chinhu chisina kuonekwa mumhando iyi yechigadzirwa munguva pfupi yapfuura uye iyo inoongwa nemwoyo wose, kunyanya kana tikaronga kusaishandisa kwenguva yakareba, Eufy yakanyatsoratidza.
Pakupedzisira, muchikamu chepamusoro, sezvatareva, tine gasi regirazi rakadzikama, bhatani rimwechete rekugadzirisa uye manejimendi uye yeWiFi yekubatanidza LED chiratidzo, hapana chimwe chinoshamisa.
Muchikamu chehunyanzvi, tine Kubatana kweWiFi kuwiriranisa yedu RoboVac G20 Hybrid neEufy app, inowanikwa pane ese ari maviri iOS sezvazviri Android zvachose pasina muripo. Isu tinewo gyro sensor yekufamba, pamwe nenhevedzano ye sensors yakatarisana nerobhoti isingadonhe pamusoro penzvimbo dzakasiyana siyana. Zvimwe chete maererano nesimba rekusveta, iro ichatenderera pakati pe1.500 ne2.500 Pa zvinoenderana nezvatinoda, nzvimbo yakaonekwa uye simba ratakagovera kuburikidza nekushandisa.
Kuchenesa uye kushanda
Kana tave synchronized irobhoti nemashandisirwo acho Eufy Kumba isu tichakwanisa kuchinjana pakati pe ina yekusveta modhi uye "kukwesha" modhi. Ichi chishandiso, kunyangwe chisina laser navigation system, chinoshandisa sisitimu inonzi Smart Dynamic Navigation, ndiko kuti, inoshandisa mitsara inofananidzwa pachinzvimbo cheiyo random system, iyo inobvumira kuti ive yakanyatsojeka uye inoshanda mukuchenesa.
Tine hurongwa hwe korobha kuburikidza nemopu yakanyorova, iyo, sezvaunonyatsoziva, inoyevedza yemapuranga uye papuratifomu pasi, asi iyo inosiya "manyoro mavanga" pa ceramic pasi.
Ruzha rukuru rwainoburitsa i55dB chimwe chinhu chinoshamisa tichifunga nezvekusveta kwayo uye kukora kwechishandiso, uye ndechekuti imwe yenzvimbo yeEufy ndeyekubheja parobhoti yakanyarara isingaonekwe. Chekupedzisira, isu tinofanirwa kuyeuka kuti isu tichakwanisa kuienzanisa nayo Alexa pese patakwanisa kuigadzirisa neapp nekukurumidza.
Zvidzoro kubva pachikumbiro:
Spot Cleaning (mumatenderedzwa)
Kana ari kuzvitonga, isu tichafamba pakati pe120 maminetsi ayo anotipa iyo yakanyarara modhi yekuyamwa kushoma, kutevera nemaminetsi makumi manomwe ekuchenesa mune yakajairwa modhi uye angangoita 35 maminetsi kana tikaisa kune yakanyanya kusveta modhi.
Panguva ino takatarisana nerobhoti rinoita zvakasiyana-siyana, iro rinomira pachena kunyanya kunyarara uye compact, iyo iri kure nezvimwe zvekunyepedzera inogumira pakuita mabasa ayo nenzira isiri-invasive. Kuzvimiririra kwakakwana uye simba rekusveta rinoshamisa, kunyanya tichifunga nezvehukuru hwechigadzirwa.
Chishandiso chine nhevedzano yezvishoma zvinoshanda zvinowirirana nehunhu hwechishandiso. Chokwadi tinosangana takatarisana neimwe nzira mukati mepakati pemutengo wakambotengeswa muSpain i300 euros, kunyangwe iwe uchigona kutozviwana zvakananga kubva ku teufy online store. Zvekare isu tinofanirwa kuyera kana zvakakodzera kutenga zvishandiso nemutengo mumwe chete iwo unopa mamwe maficha, kana kubheja pane inozivikanwa femu iyo inoshanda uye kusimba kwayo kunovimbiswa. Zvichakadaro kuchenesa kwedu, kuyamwa, kuzvitonga uye ruzha ruzivo neiyi Eufy RoboVac Hybrid G20 yanga yakanaka.
Yakatumirwa pa: 15 March we2022
Kugadziridza kwekupedzisira: 15 March we2022
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Eufy RoboVac G20 Hybrid yakangwara uye inoshanda kuchenesa [Ongororo]
Roborock inounza kuzvibvisa kune yepakati-renji zvakare
Tronsmart inopa Bang 60W, ane hutsinye anotakurika mutauri wemapati